SPY318 - OMG Outdoor Wireless 3G 4G Security IP Camera miaraka amin'ny Solar Powered CCTV - OMG Solutions
Ity vokatra ity dia fakantsary fanaraha-maso ivelany tsy misy herinaratra, tsy misy tariby, fametrahana tsotra ary fametrahana vonona.
Tsy misy fifandraisana elektrika: mandeha amin'ny herin'ny masoandro & batterie anatiny;
Tsy misy wiring: tsy manara-drindrina, tsy misy fahasimbana voaravaka;
Tohanana ny tarika 4G feno, mila misafidy ny dikan-teny; 4, fanaraha-maso lavitra: na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra;
HMD: mihetsika ny hetsika, mihetsika ny sary mihetsika;
Fiarovana amin'ny fiainana manokana: fitahirizana ao an-toerana, tsy misy leakage;
Jiro induction: hitan'ny olona, ​​jiro auto activation;
Fametrahana tsotra: DIY installnation;
Mampihatra senerians: villa, vavahady, trano, dobo fanjonoana, fambolena, saha, toeram-pitrandrahana, toerana fananganana, toerana mahafinaritra, sns.
Product: Fantsona an'ny tarika 4G
Fitsipika famporisihana: HMD (Human Motion Detection-microwave)
Tadiavina: PS5230 2.0MP 1 / 2.7 ″ CMOS
Fahazavana 4G: Tohanana ny tarika 4G feno, mila misafidy ny dikan-teny
SIM karatra: Nano SIM
Piksel mahomby: 2.0MP
Haben'ny sary: 1920 * 1080
Format nampidirina horonantsary: H.264
sary halaviran-tany: 0-15m
Zoro fitifirana: 70º
Response ny fotoana: 0.6s
Battery fahafahana: 10400mAh
Herin'ny panilo ao amin'ny masoandro: 5.5W (5.5V / 1000mA)
Mode alina fotsy jiro + infraled
Fahazavana fotsy: 1.5W LED 0.75W * 2
Hery tsy voafetra: 1W LED 0.5W * 2
Storage: Tohanan'i TF Card 4GB-64GB
Toe-draharaha: Ny karatra 32G dia azo tehirizina mandritra ny 60 andro (mitahiry horonan-tsary 6000 eo ho eo, Arakaraka ny tifitra 30 segondra, fanombohana 100 isa isan'andro), raha tsy misy toerana dia hosoloina farany ilay horonan-tsary voalohany.
zoro fanalana: 110º
Tanjona miasa: -10 ℃ to 60 ℃
Asa fiasa: Solar 4G Camera0% -90% RH
Herin'aratra: batterie +
Mijanona ho an'ny herinaratra: manodidina ny 0.05W
Fanjifana herinaratra miasa: atoandro≤2W, famoahana alina ≤2.75W
IP isa: IP67
9719 Total Views 1 Views Today